सिटिजन्स बैंक लुट प्रकरण : सिटिजन्स बैंकमा गोली चल्यो, ‘गार्ड-दाई’ भुँइमा ढले…! - jagritikhabar.com – jagritikhabar.com
सिटिजन्स बैंक लुट प्रकरण : सिटिजन्स बैंकमा गोली चल्यो, ‘गार्ड-दाई’ भुँइमा ढले…!
विराटनगर , २५ असोज ।
सिटिजन्स बैंकको कर्सिया शाखामा दशैंमा हुने कारोबारको माहोल थियो । विहानैदेखि बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरु व्यस्त थिए । दशैं अघिको नियमित कारोबारको अन्तिम दिन भएकाले पनि शाखामा चहलपहल बढी नै थियो । अरु दिनभन्दा अलि बढी भीडभाडका बीच बैंक चलिरहेको थियो ।
यहिबीच एक समूह बैंक पस्यो । उनीहरुले हिन्दी भाषामा सबैलाई सतर्क हुन र दायाँबायाँ नहुन आदेश दिंदै थिए । बैंक लुट्ने मनसाय देखिएपछी बैंकका सुरक्षा गार्डले उनीहरुलाई रोक्न खोजे । गार्डले रोक्न खोजेपछि सो समूहका एकले उनीमाथि गोली चलाए । त्यसपछिको बैंकभित्रको माहोल कुनै फिल्मको दृश्यजस्तो देखियो ।
पैसा फालाफाल भयो । स्थिति त्राहिमाम बन्यो । गार्ड भुइँमा ढले ।
बैङ्कका सुरक्षा गार्ड ३७ वर्षीय शितल कुँवरlलाई लुटेरा समूहले २ गोली हानेका रहेछन् । उनको घाँटीमुनिको भागमा गोली लागेको छ । घाइते कुँवरलाई विराटनगरको न्यूरो अस्पताल भर्ना गरिएको छ । चिकित्सकले शरीरबाट एउटा गोली निकालेका छन् । रङ्गेली नगरपालिका–२ घर भएका कुँवरले एक महिनाअघि मात्रै बैंकको सुरक्षा गार्डको काम शुरु गरेका थिए । उनी नेपाली सेनाबाट गत जेठमा अवकाश पाएका व्यक्ति हुन् ।
लुटेराहरुले कोलाहल मच्चाएपछी स्थिति त्राहिमाम बन्यो । लुटेराहरु त्यसपछी भागे । भाग्दै गरेका लुटेराहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । मोरङका प्रहरी उपरीक्षक जनार्दन जिसीका अनुसार पक्राउ पर्नेहरुमाथि अनुसन्धान भईरहेको छ ।
हुन त लुटेराहरु पनि सहजै पक्राउ परेका होइनन् । उनीहरुलाई पक्राउ गर्न पनि प्रहरीले गोली चलाउनुपर्यो । प्रहरीको गोली लागेर लुटेरा समूहका एक जना घाइते भएका छन् । यद्यपी उनीहरुबाट कुनै पनि नगद बरामद भएको छैन । यसबारे प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
(प्रत्यक्षदर्शीको कुराकानीमा आधारित)